FBC - Hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuun haaromsa gadifageenyaaf ni hojjetama jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa
Keeniyaan baqattoonni guyyoota 60 keessatti akka galmaa'an yookin akka biyyattii gadhiisanii ba'an beeksiste
Ameerikaa Iiraan qoqqobde
Ministeerichi ambasaaddaroota murtaa’an bakka jijjiiruu isaa ibse
Imaammanni barnootaa fi leenjii, mirga barachuu lammiilee kabachiisera –Ministeera Barnootaa
Pool Kaagaameen daawwii hojiitif booru Finfinnee galu
Hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuun haaromsa gadifageenyaaf ni hojjetama jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa
Finfinnee, Amajjii 1,2009(FBC) -Hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessudhaan haaromsa gadi fageenyaa milkeessuuf kutannoon jiru cimee itti fufa jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasen.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fedhii fi faayidaa ummataa gama hundaan mirkaneessudhaaf tarsiimowwan misoomaa fi ijaarsa sirna dimokraasii hojiitti hiikaa tureen milkaa’inni argame olaanaa akka ta’e beekamaadha kan jedhe ibsichi, keessumaa egeree biyyaa dhugoomsuu keessatti qooda ol'aanaa kan qaban dargaggoonni hirmaannaa fi fayyadamummaan isaanii mirkanaa’ee, rakkooleen siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee qaban hirmaannaa dammaqaa isaan taasisaniin deebii argatee, ijaarsa biyyaa keessatti gahee adda durummaa isaanii akka ba'an gochuudhaaf tattaaffiin godhamaa ture firii godhachuu eegaleera jedheera.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa, carrawwan hojii jiran sakatta’uudhaan dargaggoonni hojiitti akka baobba’an haala mijaawaa uumaa tureen dargaggoonni baay’een jireenya ofii mo'achuu bira darbanii gara abbaa qabeenyummaatti cee'uu danda’aniiru.
Hirmaannaa fi fayyadamummaan dargaggoota naannichaa daran cimee hiyyummaa fi boodatti hafummaan hundeerraa akka diigamu taasisuudhaaf humnii fi beekumsi dargaggootaa murteessaa akka ta’es amantaan mootummaa olaanaadha jedheera mootummaan naannichaa ibsa isaatin.
Haa ta’u malee carraa guddina diinagdee keenyaa kan ta’e baay’inni dargaggootaa carraa hojii uumammaa ture waliin kan wal simu hin turre.
Kanarraa ka’ees hoji dhabdummaan rakkoo hammaataa dargaggootaa akka ta’e mootummaan ni amana. Haaromsi gadi fageenyaa gaggeessaa dhufes rakkoon hoji dhabdummaa dargaggootaa rakkoo deebii hatattamaa argachuu qabu aka ta’e kallattii agarsiiseera.
Mootummaan bu’aawwan qorannaa fi haaromsa gadi fageenyaa irraa argaman qindeessudhan deebii qubsaa laachudhaaf qophaa’ummaa qabu irra deebi'ee ibsuu barbaada jedheera ibsi laatame.
Bara kanas karoora mootummaan sadarkaa olaanaatti xiyyeeffannaan qopheesse keessaa tokko carraa hojii dargaggootaa bal’inaan uumudhaan hirmaannaa fi fayyadamummaa isaanii sadarkaa hundaan guddisuudha.
Haala qabatamaa naanoo Oromiyaa keessa jiruun bara kana hoji dhabdoota miliyoona 1.3 ta’an hojiitti galchuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jira.
Carraawwan hojii uumaman kanaanis dargaggoonni dhaabbilee barnoota olaanoo fi barnoota leenjii teekikaa fi ogummaa naannichaarraa eebbifamaniif xiiyyeeffannaa addaatiin carraa kana irraa fayyadamoo akka ta'an nitaasifama jedhameera.
Karoora qabame keessatti dameewwan hojii maanifaakchariingii fi qonnaa xiyyeeffannaa olaanaa akka argatan murtaa’eeera. Kana malees dameewwan akka albuudaa, misooma beeladaa fi qurxummii, daldalaa fi tajaajilaas kallattiidhaan fayyadamummaa dargaggootaa akka mirkaneessanii fi xiyyeeffannaan kan irratti hojjetamu akka ta'an ibsichi addeessera.
Dabalataanis Proojektoonni gurguddoon dargaggootaa abbaa qabeenyaa ta’an uumuurratti xiyyeeffatan bocamanii hojiirra kan oolan ta’a.
Sagantaa kana fiixan baasudhaaf mootummaan iddoowwan oomishaa, gurgurtaa fi agarsiisaa qopheessudhaan, bu’uraalee misoomaa diriirsuu fi leenjii dandeettii raawwii dargaggootaa cimsu kennu fi walitti hidhamiinsa gabaa bal’aa uumudhaaf qophii barbaachisaa akka taasisees himameera.
Kana dhugoomsuun akka danda’amus, maallaqa madda garaagaraa irraa walitti qindeessudhaan carraawwan hojii bal’inaan uumudhaaf qophii xumureera.
Haaluma kanaanis mootumman naannoo Oromiyaa rakkoo hoji dhabdummaa dargaggootaa xiyyeffanna addaatiin furuudhaaf maallqa Birrii biliyooana 6.6 ramaduudhaan carraa hojii bal’inaan uumuuf xiyyeffaan akka hojjetamu mootummaan naannoo Oromiyaa murtessera jedha ibsi laatame.
Waan ta’eefis dargaggoonni naannichaa carraawwan hojii isaaniif uumamee duguuganii akka fayyadaman, misomaa fi guddina naannoo isaanitiif hirmaannaa hunda galeessa taasisaa fuulduratti tarkaanfachuun akka irraa eegamus eerameera.
Qaamoleen mootummaa sadarkaan jiran, jaarmiyaaleen hawaasaa, abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo naannoo keessatti argaman carraa hojii dargaggootaa bal’inaan uumudhaaf sosochii eegalame keesatti qooda isaanirraa eegamu bahachuudhaaf yeroo kamuu caalaa kutannoo cimaadhaan socho’uu qabu.
Ummatnis karoorri addaa fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneesudhaf diriire kun sirnaan hojiitti akka hiikamu tumsa barbaachsiaa akka taasisu mootummaan waamicha dabarseera.
Mooootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo hoji dhabdumma dargaggootaa humna guutudhaan hiikudhaaf kutannoo fi qophaa'ummaa akka qabus ibsichi kaasera.
Oduuwwan Biroo « Kunuunsa qabeenya uumamaa fi misooma sululaaf qophiin taasifameera	Tola oolaa maqaa xureessuun, maalif? »
Barsiisaan Afaan Tuurkii lammii Sudaan lammilee Tuurkii dinqisiise
Pirimiyar Liigii Torbee 23ffaan itti fufee gaggeeffame
Shaampiyoonaan Atileetiksii dargaggoota Ityoophiyaa 6ffaan Asallaatti eegale